Dhibaatada qaxootiga xeryaha Dhadhaab ee Kenya - BBC News Somali
Dhibaatada qaxootiga xeryaha Dhadhaab ee Kenya
8 Febraayo 2011
Madax ka socota dalka Kenya oo isugu jira mas'uuliyiin dowladda iyo baarlamaanka ka tirsan, kuwaas oo qaarkood laga soo doorto deegaanada ay ka dhisan yihiin xeryaha qaxootiga Dhadhaab, ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socota hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ee maamusha xeryahaas.
Ujeedada kulanka ayaa la sheegay in ay ahayd wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira xeryaha qaxootiga.
Qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaanka ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in guryo dhagax ka samaysan loo dhiso qaxootiga, lagana hortago dhibaatada deegaanka loo gaysanayo. Wixii xeryahaas ka batana meelo kala duwan looga dhiso xeryo kale iyo sidoo kale in qandaraasyada xeryaha qaxootiga ay helaan dadka deegaanka.
Mas'uul kale ayaa sheegay deegaanada Lagdheer iyo Faafi ay qaxooti in muddo ah soo hayeen, aysanna doonayn in culays dheeraad ah ay sii qaadaan, wuxuu yiri "labaatan sanno ayaan haynay intaan ka badanna dhabarkaan ka jabnay ma hayn karno", wuxuuna soo jeediyay in deegaanada dhinaca waqooyiga Kenya oo uu sheegay in ay dad yar yihiin la geeyo qaxootiga ku saa'idka ah inta hadda ay qorsheynayaan.
Weriyaha BBC-da Bashkas Jug-soo dhacay ayaa waraystay kadib kulanka madaxda ka qaybgashay ee isugu jira kuwo ka socda dowladda, baarlamaanka iyo hay'adda UNHCR.